Jony Ive anoda kugadzira dhizaini yekupa | Ndinobva mac
Mushure mekugadzira zvimwe zvezvigadzirwa zvemagetsi zvemakumi maviri emakore apfuura, Apple's Designer, Jony Ive, ane zvimwe zvinonetsa mupfungwa, zvinonetsa zvisina chekuita netekinoroji, asi nehupenyu hwezuva nezuva hwevanhu vazhinji. Mazuva mashoma apfuura Norman Foster Foundation yakaronga musangano umo isu taigona kuona Jony Ive semuyenzi nyeredzi, uyo akasiya vese vaivapo vakavhiringidzika paakataura dambudziko idzva raaida kusangana naro munguva pfupi yapfuura: sipo yekupa.
Asati ajoina Apple, Jony Ive aishanda muUK uye imwe yemagadzirirwo ake akakurumbira yaive dhizaini yekugezera yakazara, izvo zvinosuruvarisa kuti hatina mifananidzo. Zvinotaridza sekunge aneta nehunyanzvi uye anoda kudzokera kumidzi yake. Ndanga ndiine Apple kubvira 1992, uye chave chiri chikamu chakakura chekugadzirwa kweMac, iPod, iPhone, iPad, uye Apple Watch. Asi kana iye asina dhizaini yakamirira kana kutora nguva yekuenda, anosangana pamwe neshamwari yake Marc Newson, kugadzira zvigadzirwa zvekugadzira, seLeica Kamera, imwe yeanogadzirwa ekupedzisira.
Sekureva kwaJony Ive, hapana yakanaka yekupa sipo uye inyaya inomushungurudza zvakanyanya, izvo zvakamanikidza Jony tarisa kuedza kwako kutsva mukugadzira yakakwana sipo yekuparadzira, Iyo iDispenser. Jony haana kuburitsa zvimwe zvakawanda nezvekuti sipo yekuparadzira inogona kunge iri sei, saka parizvino hatigone kuziva kuti Jony arikufungei nezvenyaya iyi. Ini handinyatso kuziva kuti chii chiri kutsvakwa naJony mudhipatimendi, asi chinofanira kunge chiri chinhu chakakosha kwazvo kwaari kuti ataure kuti yakakwana sipo yekuparadzira haisati yatangwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Jony Ive anoda kugadzira sipo yekuparadzira
Errata mundima yekupedzisira, mutsetse wekutanga: mubvunzo unomushungurudza zvakanyanya